Fahatsiarovana ny maty: nandeha ny tsenan’ny voninkazo | NewsMada
Fahatsiarovana ny maty: nandeha ny tsenan’ny voninkazo
Fotoana tsara ho an’ireo mpivarotra voninkazo ny fanamarihana ny fahatsiarovana ny maty rehefa fiandohan’ny volana novambra. Betsaka ireo fianakaviana mandeha mamangy fasana, manatitra voninkazo hahatsiarovana manokana ireo havana efa nodimandry.
Teny Anosy, nilaza ny fahafaham-pony ireo mpivarotra voninkazo. Betsaka ireo nisafidy ny voninkazo nambolena anaty tavy. Maharitra kokoa izy ireny ka tian’ny olona. Efa am-bolana ihany koa no nikolokoloan’ny mpivarotra ireny voninkazo madinika maniry anaty tavy ireny hamidy sy hanomezana fahafaham-po ireo fianakaviana tia manatitra voninkazo rehefa fahatsiarovana toy izao.
Manodidina ny 1.000 Ar hatramin’ny 5000 Ar ireo voninkazo nambolena anaty tavy, arakaraky ny kalitaony sy ny habeny. Misy fianakaviana maka ampolony mihitsy hoentina eny amin’ny fasana rehefa toy izao, hoy Raivobe, mpivarotra voninkazo.
Ny sasany nisafidy ireo voninkazo artifisialy efa voarafitra tsara hapetraka eny amin’ny fasana. Ny an’ny hafa kosa voninkazo maina no nosafidiany.
Nihena raha oharina amin’ny isan-taona anefa ireo mpividy voninkazo, raha ny fanamarihan’ireo mpivarotra hatrany. Anisan’ny anton’izany ny fahamaroan’ireo fiangonana zandriny izay tsy mandala loatra ny fombafomba mahakasika ny razana sy momba ny maty.